पुँजी बजार ओरालो लागेसँगै म्युचुअल फन्डहरु पनि सुस्ताएकै हुन त ? (तथ्यांकसहित)
काठमाडौं : अहिले म्युचुअल फन्डहरुको प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । बजार सुस्त भएसँगै फन्डहरुको प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो । १३ वटा म्युचुअल फन्डमध्ये जेठमा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ को प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य मात्र बढेको छ भने बाँकी सबै तल झरेका छन् ।
सिटिजन्सको भने वैशाखमा खुद सम्पति मूल्य १० रुपैयाँ १३ पैसा रहेकामा जेठ महिनामा आइपुग्दा ५ पैसाले बढेर १० रुपैयाँ १८ पैसा देखिएको छ । यस फन्डको सूचीकृत सेयरमा लगानी पनि बढेको छ । सेयर बजार निरन्तर घट्दा म्युचुअल फन्डहरुमा पनि असार परेको हो । तर बजारलाई गति दिन पनि म्युचुअल फन्डहरुको उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अहिले म्युचुअल फन्डहरुले सेयरमा लगानी गर्ने भन्दा पनि पैसा बैंक निक्षेपमा राखेर ब्याज खानतर्फ उद्दत देखिएका छन् । म्युचुअल फन्डहरुले जोखिम मोल्न नचाहने स–साना लगानीकर्ताहरुलाई आर्षित गर्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा यी फन्डहरुले साना लगानकिर्तालाई आकर्षित गर्नु भन्दा पनि ब्याज खाने भाँडोको रुपमा प्रस्तुत भएकाले ब्यापक आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
पुँजी बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको समयमा बजारलाई माथि उकास्न यस्ता फन्डहरुले पनि लगानी बढाएमा बजार सुधार्न सहयोग पुग्ने थियो । तर फन्डहरुले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन् । वैशाखको तुलनामा जेठमा अधिकांश म्युचुअल फन्डहरुको सूचीकृत सेयरमा लगानीसमेत घटेको छ ।
वैशाखमा ६७ करोड ८७ लाख ५४ हजार २३४ रुपैयाँ सूचीकृत सेयरमा लगानी गरेको नबिल इक्विटी फन्डको जेठमा ६६ करोड ५५ लाख ६ हजार ६० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, लक्ष्मी भ्यालु फन्ड–१ को पनि सूचीकृत सेयरमा लगानी ३३ करोड ६७ लाख ६६ हजार ९७८ रुपैयाँबाट घटेर ३० करोड ९४ लाख ९८ हजार ८६२ रुपैयाँमा आइपुगेको छ ।
यता, एनआइबीएल सम्मृद्धि फन्ड–१ को पनि सूचीकृत सेयरमा लगानी घटेको रिपोर्टले देखाएको छ । यसको वैशाख महिनामा ८३ करोड ८७ लाख ११ हजार २८१ रुपैयाँ लगानी रहेपनि जेठ महिनामा आइपुग्दा ७८ करोड ८८ लाख ७१ हजार ७८३ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । केहीको भने सेयरमा लगानी सामान्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।
लेभी स्ट्रसले आइपीओ ल्याउने, भारत र चीनमा व्यापार विस्तार योजना
साताभर १ करोड ६२ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत हुँदा नेप्सेमा अरु के–के भयो ?
पोखरा फाइनान्सको ५% बोनस पुग्यो लगानीकर्ताको खातामा, सेयर डिम्याट गर्न आग्रह
गोर्खाज फाइनान्सको साधारण सभा फागुन १० मा बस्ने, सेयरधनीलाई छैन लाभांश
सहयोगीको १७% लाभांश, फागुन २५ मा एजीएम गर्न यसरी हुनेछ बुक क्लोज
निर्धन उत्थानले खातामै पठायो २०% बोनस सेयर